Barta internetka ma ku iibisaa alaabtaada iyo adeegyadaada?
Carl-Henry-Internet-How-to-set-up-a-online-business_basic-hanta-iibintaWebsaydhkaagu waa inuu iibiyaa badeecadaada ama adeegyadaaga, waxaan ugu yeernaa "nidaamka iibka tooska ah" ama "Sales Funnel". Sawirka halkan wuxuu ku tusayaa qaab dhismeedka bilowga ah ee aasaasiga ah (dhagsii sawirka si aad u soo degsato PDF) kaas oo dib loo sixi karo oo lagu dhisi karo. Waa inaad leedahay a nidaamka ganacsiga internetka si aad ugu guulaysato eCommerce maalmahaas, waa inaad qaadataa hab xirfad leh adoo adeegsanaya qaababka iibka ah ee la soo saaray.
Dulmar kooban oo kooban
NIDAAMKA AQOONSIGA ONLINE - Waxaa jira siyaabo kala duwan oo lagu dhisi karo qaabka online-ka ah ee aan ka wada hadli doono meelo kale. waxaad haysataa 3 doorashooyinka; U raadso qof inuu ku tuso sida loo sameeyo, u raadso qof inuu kuula sameeyo ama uu qof kuu dhigo.
Dadka - waxaad u baahan tahay inaad ka fekerto cidda dhagaystayaashaadu tahay, mawduuca uu badeecadaadu ku salaysnaan doono (Nest-kaaga), ma jiraan koox dad ah oo xiisaynaya kuwaas oo lacag ku bixin doona sheygaaga? Hal shay oo caam ah oo ku saabsan badeecada ama adeegyada ayaa ah in ay xalliyaan “dhibaato” ama “ubaahan tahay” macaamiishaada, shaqadaada waa in la gartaa dhibaatada ama u baahantahay oo bixi “xalka” (badeecadaada / adeeggaaga) Marka aad go’aansato, ka dib adoo sameynaya cilmibaarista lagama maarmaanka ah, markaa waa inaad la xiriirtaa kooxdan (Gaadiidka) oo aad ku hagtid boggaaga koowaad (Bogagga Bogga ama Optin Page).
HORUMARKA / OPTIN PAGE - Tani waa xidhiidhka ugu horeeya ee aad la yeelanayso macaamiishaada mustaqbalka, waxaad haysataa wakhti xaddidan oo aad ku soo jeedin karto. Hal dariiqo ayaa ah inay bixiyaan macluumaad faa'iido leh iyo / ama qiimo leh oo ah qaab hadiyad lacag la'aan ah, tani waa dhiirigelin iyaga si ay kuugu siiyaan cinwaanka emailkooda (Tani waa muhiim).
GIFT BILAASH AH - Tani waa inay la mid noqoto maadadaada oo la mid ah badeecadaada, sidoo kale waa inay siisaa fursad macaamiishaada mustaqbalka inay hesho natiijooyin deg deg ah dhanka xalka ay raadinayaan. Hadiyadda gudaheeda dhexdeeda waxaad sidoo kale heli doontaa sharraxaad ku saabsan sida badeecadaadu u xalliso dhibaatada ama baahida iyo xiriiryada bogga iibka. Hadiyaddaada bilaashka ah waxaa lagu soo gaarsiin karaa isla markiiba "Bog Mahadsan" ama emayl otomaatig ah.
U SHAQEYSO LAMBARKA LAGU QAADO - Markaad uheshid inay galaan faahfaahintooda foomka optin-ka waxaad kuheli doontaa nidaam otomaatig ah kaasoo kuu soo diri doona e-mayl leh macluumaad dheeri ah oo faa'iido leh (An Autoresponder) oo ay kujiraan "Wicitaanada Waxqabadka" si loogu dhiirigaliyo inay soo booqdaan bogga iibkaaga iyo jajabka. bixi dalabkaaga.
SALES SOOMAALI - Tani waxay sharraxaysaa sida ay badeecadaada ama adeeggaagu u siinayo macaamil macaamiishaada, waa inaad u abuurtaa tan si aad ugu sharraxdo "WIIFM" (Maxaa aniga aniga igu jira). Waa inaad ku eegtaa badeecadaada gabi ahaanba indhaha macaamiishaada. Alaabta ama marin u helka adeeggaaga ayaa isla markiiba noqoneysa haddii ay noqoto mid dijital ah ama waxaad ku bixin doontaa tilmaamaha tillaabooyinka xiga ee emaylka degdegga ah haddii ay tahay shey ama adeeg internet ah.
BIXINTA - Waxaad u baahan doontaa inaad hesho hab laguugu soo ururiyo lacagaha internetka sida booska PayPal ama bangigaaga.